गैरआवासीय नेपालीको सरकारसँग प्रतिबद्धता : यसै वर्ष १० अर्ब लगानी - VOICE OF NEPAL
गैरआवासीय नेपालीको सरकारसँग प्रतिबद्धता : यसै वर्ष १० अर्ब लगानी
१२ चैत्र २०७५, मंगलवार ११:२६ 141 ??? ???????
काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघले नेपालका पूर्वाधार विकासमा सरकारसँग मिलेर १० अर्ब बढीका परियोजनामा यसै वर्ष लगानी गर्ने भएको छ ।
यसका लागि आसन्न लगानी सम्मेलनमा ‘एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्मेन्ट कोष’ स्थापनासम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुने भएको छ ।
गैरआवासीय नेपालीको लगानी विभिन्न आयोजनामा छरिएर आउँदा ठूलो परिणाम नदेखिएकाले कम्पनी खडा गरेर एकमुष्ठ रुपमा लगाउन खोजिएको पन्तले बताए ।
सम्झौतापत्र तयार भइसकेको र लगानी सम्मेलनका क्रममा एनआरएन अध्यक्ष भवन भट्ट तथा नेपाल सरकारका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्ने संघले जनाएको छ ।
कम्पनीको शेयर, बैंक ऋण लगायतका सबै प्रबन्ध नेपालको कानुन अनुसार नै सम्बद्ध निकायले सहजीकरण गर्नेछन् । गैरआवासीय नेपाल्ी संघले पहिलो चरणमा एक वर्षभित्र १० अर्ब रुपैयाँ नेपालमा लगानी ल्याउने सम्झौतापत्रमै उल्लेख हुनेछ ।
कोषमा नेपाल सरकारको पनि सामान्य हिस्सा रहनेछ । तर, नेपालमा बस्ने नेपालीले भने कम्पनीको शेयर किन्न पाउने छैनन् ।
कम्पनी खडा भएको १ वर्षभित्र १० अर्ब नेपालमा भित्र्याउने र सो रकम अहिले बनिरहेका परियोजना, एनआरएन आफैंले पहिचान गर्ने नयाँ परियोजना वा साझेदारीमा पनि लगानी गर्न सकिने गरी काम भइरहेको उपाध्यक्ष पन्तले बताए ।